धादिंग घ टनाः ‘मलाई नाम्लोले बाँध्यो, मैले हेर्दाहेर्दै तेल ततायो र मेरो टाउकोदेखि तात्तिएको तेल खन्यायो’, पि डित पुजा (भिडियो) – Online Saptarangi
धादिंग घ टनाः ‘मलाई नाम्लोले बाँध्यो, मैले हेर्दाहेर्दै तेल ततायो र मेरो टाउकोदेखि तात्तिएको तेल खन्यायो’, पि डित पुजा (भिडियो)
November 11, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on धादिंग घ टनाः ‘मलाई नाम्लोले बाँध्यो, मैले हेर्दाहेर्दै तेल ततायो र मेरो टाउकोदेखि तात्तिएको तेल खन्यायो’, पि डित पुजा (भिडियो)
श्रीमान र श्रीमतीबीच झ गडा भएन भने त्यो सम्बन्ध के सम्बन्ध ? तर झ गडा गर्नुको अर्थ यो पक्कै होईन कि श्रीमतीलाई हात खुट्टा बाँ धेर ता तो ते ल उसको शरिरमा ख न्याईदिने । यो कस्तो सम्बन्ध ? कति निर्दयी हो त्यो मन ? के यो एउटा सामान्य मानिसले गर्न सक्ने काम हो ? के हिजोआज हाम्रो समाजमा मानवता क्रु’र बन्दै गएको हो त ? हो भने हाम्रो समाजबाट निस्किएर कुन देश, कुन शहर र कुन गाउँमा गएको छ मानवता ?
मानवता हराउँदै गएको कुरा गरिरहंदा धादिंगमा पछिल्लो चोटी आफ्नै श्रीमतीलाई हातखुट्टा ‘बाँ”धेर ता’तो ते’ल ख’न्याएका छन् श्रीमान र सासुले । सन्दा पनि शरिर नै थररर काँ’पेर आउँछ भने ता ‘तो ते’ल आफ्नो श’रिरमा ख’न्याइँदा त्यसको पि’डा ती महिलाले कसरी सहन सकेकी होलिन् ?
आजभन्दा ३ दिन अगाडी धादिंगको निलगण्डक नगरपालिका को ११ मा २० वर्षिय पुजा परियारलाई उनकै श्रीमानले सामान्य घर झ”गडामा भएको यो घटनाको समाचार हामीले प्रकाशन गरिसकेको हुनाले आज सोही घटनाको फलोअप गरिरहंदा त्यो दिनको वास्तविकताको बारेमा फेरी अर्कों समाचार बनाएका छौं ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यो समाचार बनाउँदा हामीले सोही वडाकी जनप्रतिनीधि कमला श्रेष्ठको भनाईका आधारमा बनाएका हौं । उनले यो घटनालाई जघन्य अ’पराधको रुपमा लिएकी छिन् । उनले पुजालाई गाउँमा अरुको तुलनामा सोझी र इमान्दार भएको बताएकी छन् । जनप्रतिनीधि श्रेष्ठको भनाई अनुसार पिडित पुजाको श्रीमान गाउँमा पनि अरुसंग झ ‘गडा गर्दै हिंड्ने गरेको र त्यति राम्रो छवी नभएको व्यक्ति रहेछन् ।
एक अन्तरवार्तामा जनप्रतिनीधि श्रेष्ठले यो घटना बुझ्नकोलागी वडाअध्यक्ष आफै अस्पताल गएको बताएकी छन् । उनले वडासंग पुजाको पछिल्लो अवस्थाको स्वास्थ्यको बारेमा बुझेको पनि बताएकी छन् । सोही क्रममा उनले वडाध्यक्षसंग गरेको टेलीफोन सम्बादका आधारमा हामीले समाचार बनाएका छौं ।
पुजालाई प्रत्यक्ष रुपमा अस्पताल गएर भेटेका ११ नम्बर वडाका वडाध्यक्षले पुजाको अवस्था खतरामुक्त भएको बताएका छन् । उनले आफैले पुजालाई अस्पतालमा २० मिनेट जति भेटेर कुरा गरेको बताए । उनका अनुसार श रिरको अं’गहरुमा औ’षधी उपचार चलिरहको छ । भित्री चो’ट भने नभएको उनले बताएका छन् ।
वडाध्यले पुजासंग गरेको कुराकानी अनुसार घरझ”गडाकै निहुँमा सो घटना घटेको थियो । त्यसरी झ”गडा पर्ने क्रममा पुजाले आफुलाई बताएको कुरा उनले यसरी सुनाए,‘हामीबीच झ ‘गडा भईरहन्थ्यो । मलाई हा ‘न्ने मा ‘र्ने गथ्र्यो । त्यो दिन पनि मलाई हा ‘न्यो । दुखेर चि”च्चाउँदा त्यो दिन मलाई धो’का थु’नेर भारी बोक्ने नाम्लोले मेरो घाँ ‘टीमा बाँ”धियो । र यहाँभन्दा पनि तँ चि’च्चाईस् भने तलाईँ च”क्कुले हा”’नेर मा”’र्छु भन्ने ध”’म्की दिंदै मेरै अगाडी तेल त”ताएर मलाई बाँ”’धेराखेकै अ’वस्थामा टा”उकोबाट ख”न्याईदियो ।’
पिडित पुजाले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा अस्पतालसम्म बुुझ्न आएका वडाध्यक्षलाई रुँदै सासुले पनि श्रीमानलाई साथ दिएको बताईन् । अस्पतालको बेडबाटै हो’स खुलेपछि उनले रुँदै वडाध्यक्षलाई भनिन्,‘त्यो सबै घटना भईरहँदा मेरी सासु पनि त्यही नै हुनुहथ्यो तर उहाँले छोरालाई रोक्नु भएन । न त मेरो श’रिरमा ता ”तो ते”ल ख’न्याईसकेपछि गाउँलेलाई गुहारेर मलाई अस्पतालसम्मै लैजाने कुनै व्यवस्था नै गर्नु भयो ।’
पुजासंग प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गरेका वडाध्यक्षले सासु सिता परियारको यो घटनामा संलग्नता रहेको बताएका छन् । उनले पुजाको भनाईका आधारमा सासुको पनि अप्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष यो घटनामा संलग्नता रहेको बताएका छन् । पुजाको श्रीमानलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
पाँडे जिग्री भा वुक हुँदै मिडियामा, नेपाल टेलिभिजनले वास्तै गरेन भन्दै सक्किगोनीको बिषयमा बोले | (हेर्नुहोस भिडियो)
इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन ‘प्रोटोकल’ तयार
November 4, 2020 Prakash Waiba
प्रिन्सी र प्रिज्मालाई माया गर्दै नाजिर
October 7, 2020 Prakash Waiba
नक्कली भिसा देखाएर क्रोएसिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई पक्राउ